सरकारले कानूनी मान्यता प्रदान गरे पनि अझै किन असुरक्षित गर्भपतन ? | suryakhabar.com
Home प्रदेश प्रदेश5सरकारले कानूनी मान्यता प्रदान गरे पनि अझै किन असुरक्षित गर्भपतन ?
सरकारले कानूनी मान्यता प्रदान गरे पनि अझै किन असुरक्षित गर्भपतन ?
on: ३ मंसिर २०७५, सोमबार १४:०० In: प्रदेश 5, स्वास्थ्यTags: No Comments
बाँके । नेपाल सरकारले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरे पनि बाँकेमा सुरक्षितभन्दा पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या अत्याधिक छ । गर्भपतन गराउनेमा अविवाहित महिलाको सङ्ख्या बढी देखिएको छ ।
उनले भनिन्, “हाम्रै देशमा गर्भपतन हुन्छ, भन्ने मलाई थाहा छैन । गाउँमा घाँस दाउरा गर्छु, पढे लेखेको छैन । हामीजस्ता महिलालाई के थाहा ?” उनका श्रीमान् नरबहादुर भारतमा मजदूरी गर्छन् । उनलाई पनि नेपालमै गर्भपतन गराउने व्यवस्था छ भन्ने जानकारी नहुँदा र छिमेकीले थाहा पाउलान् भन्ने डरले भारतीय बजारमा पुगेको नरबहादुर बताउछन् ।
कानूनी अज्ञानता र चेतनाको अभावका कारण गर्भपतन गराउन भारतका शहर पुग्ने महिलाले त्यहाँ अमानवीय व्यवहारसमेत सहनुपर्छ । गर्भपतनपछि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी सल्लाह नपाउँदा कतिपय महिलाको स्वास्थ्य थप जोखिममा पर्ने गरेको छ । नेपालमै सुरक्षित र भरपर्दो गर्भपतनको सुविधा हँुदाहुँदै पनि त्यसको जानकारी नपाएकै कारण ग्रामीण समुदायका महिला खर्चिलो र जोखिमपूर्ण ढङ्गबाट गर्भपतन गराउन बाध्य भएका हुन् ।
रुपेश बस्नेत र मोनिका लामाको अभिनयमा “नरिसाइ दिनु” (भिडियो सहित)
गोविन्द केसी अस्पताल भर्ना, ईमर्जेन्सीमा उपचार हुदैँ
३ मंसिर २०७५, सोमबार १४:००